Reviews Archives — Page2of3— Anycall Mobile
ဒီတစ်ခါတော့ ဖုန်းတွေအကြောင်း မပြောဘဲ ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ Display နည်းပညာတွေ အကြောင်း ပြောရအောင် လားဗျာ…။ ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ ဖုန်းအများစုမှာ LCD နဲ့ OLED ဆိုတဲ့ Display နည်းပညာနှစ်ခုကို အသုံးပြုထားကြပါတယ်။ ဒါဆို အဲ့နှစ်ခုက…
နာရီဝက်အတွင်း အားပြည့်မယ့် Oppo Reno Ace (သို့)ကမ္ဘာ့ အမြန်ဆုံး အားသွင်း စနစ်ပါတဲ့ဖုန်း…
Unicode Version ဒီကနေ့ Oppo ဟာ တရုတ်ပြည်မှာ သူတို့ရဲ့ Flagship ဖုန်း အသစ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Reno Ace ကို တရား၀င် မိတ်ဆက်သွားပါပြီ။ Reno Ace ရဲ့ Specs တွေကတော့…
TikTok လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့လို လူငယ်တွေနဲ့ အနုပညာရှင်တွေ အကြားမှာ မသိသူ မရှိလောက်တဲ့အတော်လေး ရေးပန်စားတဲ့ Video App တစ်ခုပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း TikTok မဆော့ဘူး ဆိုရင်တောင်မှ ဖန်တီးမှုအရမ်းကောင်းတဲ့၊ စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့၊ ရီစရာကောင်းတဲ့၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့၊… TikTok…
Call Of Duty VS Player Unknown Battleground
ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ အပစ်အခတ် ဂိမ်းနှစ်ခုကို ပြောပါဆိုရင် PUBG ဆိုတဲ့ Player Unknown Battleground ရယ် COD ဆိုတဲ့ Call Of Duty ဂိမ်းနှစ်ခု က ထိပ်ဆုံး စာရင်းမှာ ရှိပါတယ်။…
MIUI 11 ရဲ့ အလန်းစား Features များ…
Fast Charging Technology ~ အားအမြန်သွင်း နည်းပညာ
အတိုဆုံး ဖြေရရင် … ဟုတ်ကဲ့ ဈေးချိုလာမှာပါ။ 5G ရဲ့ အရမ်းမြန်တဲ့ Speed Test Videos တွေကို အားလုံးမြင်ဖူး တွေ့ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ 5G Support ပေးနိုင်တဲ့ ဖုန်းတွေရဲ့…
iPhone XS Series VS iPhone 11 Pro Series
Apple ရဲ့ High-ends iPhones တွေဖြစ်တဲ့ အရင်နှစ် iPhone Xs Series နဲ့ ဒီနှစ် iPhone 11 Pro Series တွေဟာ Triple Camera Bump နဲ့…
အရင်နှစ် iPhone XR ထက် ဒီနှစ် iPhone 11 က ဘာတွေ ပိုကောင်းသွားလဲ?
ဒီနှစ်အတွက် Apple ရဲ့ ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ iPhone လို့ ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ iPhone ကတော့ iPhone 11 ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်နှစ်က iPhone XR ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲလို့လည်း ပြောလို့ရတဲ့ ဒီနှစ်ထွက်iPhone 11…
မနေ့က ပြုလုပ်သွားတဲ့ Xiaomi ရဲ့ “EXPLORE A FUTURE WITHOUT LIMITS” ဆိုတဲ့ ပွဲမှာ လူတွေကို အုတ်အုတ်ကြတ်ကြတ်ဖြစ်သွားစေတဲ့ Xiaomi Mi MIX Alpha ဖုန်တစ်လုံးတည်းပဲ မိတ်ဆက်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။…
Monday Versus : MediaTek and Qualcomm
ဖုန်းတွေနဲ့ နီးစပ်တဲ့သူတွေ နဲ့ Tech ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ ကြားမှာ အမြင်မှား အထင်မှားနဲ့ တော်တော်လေး ငြင်းခုန်နေကြတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲတာကတော့…. ဘယ် Brand က ဘယ် Brand…
Uicode Version Apple ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် iOS 13 ဟာ iPhones အများစုဆီကို ရောက်ရှိလို့ လာပါပြီ! ဒီတော့ iOS 13 ရဲ့အသုံးအဝင်ဆုံးနဲ့ အမိုက်ဆုံး Features အချို့ရဲ့ အကြောင်းကို…
လူတွေ ပြောပြောနေတဲ့ IP Ratings တွေဆိုတာ…?
Unicode Version ကျွန်တော်တို့နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး နေ့စဉ် မြင်တွေ့နေရတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ IP Ratings အမျိုးမျိုး ပာရှိနေတာကို သတိထားမိမှာပါ။ ဥပမာ။ ။ IP67, IP68 , … စသဖြင့်…။ IP…
Root ဖောက်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်တွေက ဘာတွေလဲ?
Unicode Version “Root ဖောက်တယ်” ဆိုတာ ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေရဲ့ အကြားမှာ မစိမ်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းတစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများက Root ဖောက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အမြင်မှား နားလည်မှားနေကြတာကိုလည်း တွေ့နေရပါတယ်။ ဒီတော့ Root…
What is USB-C/ USBType-C?
Unicode Version USB-C/ USB Type C ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အတော်လေး ရင်းနှီးနေတဲ့ အသုံးအနှုန်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဖုန်းတွေ တက်ဘလက်တွေ လက်တော့ပ်တွေနဲ့ တခြား အိုင်တီနဲ့ ဆက်စပ်…